Y ထည့်ပါ။ သင်၏ Sidebar တွင်နေထိုင်ပါ။ | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2008 သောကြာနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2008 Douglas Karr
ငါ Y အကြောင်းတော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ တိုက်ရိုက် - အံ့သြဖွယ်နည်းပညာ! ဒါကြောင့်ငါရှေ့ဆက်သွားနှင့်ငါ့ sidebar မှာတိုက်ရိုက်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်! ကျွန်တော်အသံလွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်ဘေးနားရှိ ol 'laptop မှာအလုပ်လုပ်နေတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ ငါဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲ အလုပ်ကနည်းနည်းပဲယူတယ်၊
ကျော်လွှားရန်အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲမှာ Yahoo! ၏စာရွက်စာတမ်းများသည်အမှန်တကယ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုညွှန်ပြရန် URL မှားယွင်းနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Y အတွက်ကုဒ် Sidebar မှာနေပါ
> param name = "ရုပ်ရှင်" တန်ဖိုး = "http://live.yahoo.com/swf/v1/ylsp/douglaskarr" />
> param name = "အရည်အသွေး" တန်ဖိုးကို = "မြင့်" />
> param name = "allowScriptAccess" value = "အမြဲ" />
အရည်အသွေး = "မြင့်"
အမြင့် = "၁၃၅"
allowScriptAccess = "အမြဲတမ်း"
align = "အလယ်"
play = "မှန်"
> / အရာဝတ္ထု>
9:2008 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 6, 43
ကောင်းတဲ့အလုပ်။ သင် Yahoo ကိုအသိပေးခဲ့သလား အကယ်၍ သင်သည်ဤနှုန်းအတိုင်းဆက်ရှိနေပါကမကြာမီ Microsoft သည်လည်းသင်အား ၀ ယ်မည်
ကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့စမ်းသပ်မှုဖြစ်လိမ့်မည် အဘယ်အရာသည်အဝလွန်မည်နည်း။ အလုပ်ခွင်၌သင်အလွယ်တကူကြားဖြတ်ခံရခြင်းအတွက်မျှတသည့်အခွင့်အရေးရှိပါသလား။
ဒါပေမယ့်သူကပြောပါတယ်, ဒီ is စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောနည်းပညာအတွက်ယခုကျွန်ုပ်သည်ပြည်တွင်းစျေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
10:2008 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 56
မင်္ဂလာပါ modifoo! ငါ Yahoo ကဆက်သွယ်ခြင်းများအတွက် link ကိုရှာကြ၏! သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိရိယာတွေပတ်ပတ်လည်မှာရှာပေမယ့်မတွေ့ရဘူး။
ငါအလုပ်ချိန်အတွင်းထုတ်လွှင့်တော့မည်မဟုတ် - သင်မှန်ပါသည်၊ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတကယ်နှောက်ယှက်နိုင်သည်။
13:2008 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 6, 03
ဒီ link ကိုစမ်းကြည့်ပြီးပြီလား
9:2008 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 5, 06 တွင်
ကျွန်ုပ်သည် SEO လုပ်ငန်း၌ ၀ င်ရောက်နေသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်အတွက်အလွန်ကောင်းသော်လည်းအန္တရာယ်ရှိသည်။ spammers တော်တော်များများကငါအွန်လိုင်းရှိတယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါ link တွေဖလှယ်ချင်ကြတယ်။
9:2008 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 5, 11 တွင်
ကျွန်ုပ်သည် SEO ဟန်မတူပါ (ကျွန်ုပ်ဟန်ဆောင်ဟန်တူပါသည်) နှင့်တူတူပင်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော် Y ကိုလူသိရှင်ကြားမပြခဲ့ရင် Y! မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြဘဲနေခဲ့ရင် spammers တွေကိုမနေပါနဲ့။
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?					ပြန်ကြားချက် Cancel